Hiran State - News: Dhacdo la yaab leh oo ay TFGdu ka wado qurbaha kuna saabsan shirak Mogdisho.
Dhacdo la yaab leh oo ay TFGdu ka wado qurbaha kuna saabsan shirak Mogdisho.
Dowlada:-Tan iyo markii ay soo shaac baxday in shir loogu magac daray ujeedo badan lagu qabanayo magaalada Mogdisho si waqtiga loogu kardhiyo xukumada hada jirto ayaa waxaa uu dhawaantan u magacaabay R/wasare Farmajo gudi ka kooban ilaa 5 xunbood oo iskugu jira maamulka gobolka Banaadir iyo tiro wasiiro ah.
Gudigaasi oo aan iska warqabin amaba aan wax isla meel dhigin midkasta waxuu dibada kala soo xiriiray shaqsiyaad ay qaraabo yahiin oo ay fikirkooda iyo sidey wax u rabaan u sheegeen hase ahaatee meel aan munaasib aheyn ayey qaarkood ka bilaabeen kedib markii ay dad aan waligood Schoolba jaanis u helin la soo xariireen kedibna waxey bilaabeen taageerayaashii lala soo xariiray iney dadka maqaayadaha ugu tagaan oo ay ku dhahaan ma dooneysaa ticket aad shirka Mogdisho kaka qeyb gasho? marka uu qofku yiraahdo haa waxey leeyahiin waxaa jira sharuudo dhawr ah oo ay ka mid yahiin.
1- Inaad taageersan tahay dowlada una ololeyneyso sidii waqti loogu dari lahaa xukumada Farmaajo iyo Madaxweynaha.
2- Waa inaad keentaa dhaqaalo aan hada la cayimin oo laashuush u muuqday oo dadka baxayo hadeyba dhacdo la weydiinayo taasi oo aad uga careysiisay dad badan oo ay Somalinimada iyo in dalka xal loo helo ay dhab ka tahay.
3- Gudiga la magacaabay ilaa hada waxey ka kooban yahiin 5 xubnood oo iskugu jira masuuliyiinta ugu sareysa gobolkka Banaadir qaarkood iyo tiro wasiiro ah laakinse waxaa shacabka soo gaarayo warar iska soo horjeeda oo dhawr shaqsi ay ku leeyahiin anigaa hogaaminayo gudiga isku daba ridka doorashada soo socoto.
Wadamada ay jaaliyadoodu qoorta isla galeen markii ay maqleen in loo qoondeeyey 25 xubnood oo shirka uga qeyb gala qurba joogta UK ayaa iyagu uu hareeyey muran kedib markii dadka si aan anshax aheyn ay ula hadleen shaqsiyaad ay la soo xariireen wasiiro xukumada Farmaajo ka tirsan iyagoo marka ay dadka wacaan ku dhahayo waryaa ma dooneysaa inaad Mogdisho aado keen wax cadeynayo inaad tahay aqoonyahan iyo wax la mid ah.
Mar aanu xiriiro kala duwan la yeelanay qeybaha kala duwan ee Somalida qurbaha ee ku nool wadamada ay hada ka socdaan jahwareerka shirka Mogidsho qaabka loo qabanayo ayey inoo xaqiijiyeen iney lagama marmaan tahay in la hubiyo aqoonta ay sheeganayaan wasiiro badan oo xukumada Farmaajo ka tirsan kedib markey qaabka ay u dhaqmaan iyo sidey shacabka u sii kala fogeynayaan ay aad ula yaabeen waxgarad badan oo qurbaha ku nool.
Hadaba waxaanu dhawaantan idiin soo bandhigi doonaa magacyada xubnaha gudigaani madaxda looga dhigay iyo dadka ay qurbaha kala soo xariireen ee arintan heerkaan gaarsiiyey wadamada ay kala joogaan iyo midabka rasmiga ah ee xukumada Farmaajo ee loogu yeero xukumada ay hogaanka u hayaan qurbo joog aqoonyahano ah.
Warar hada inaga soo gaaraya Mogdishona waxey sheegayaan in gudiga la magaacay cidii hogaamin laheyd ay isku heystaan wasiir ka tirsan xukumada Farmaajo iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inkasta oo aanu dooneyn in aanu arintaasi ka hor dhacno ilaa aanu ka soo dhameystireyno war bixin hada qabyo inaga ah.
· admin on May 31 2011 12:27:53 · 0 Comments · 1947 Reads ·
14,613,664 unique visits